Inwe nsogbu ị na -ahọrọ igbe igbe? Anyị ga -enye gị ndụmọdụ! - Ngwongwo ụlọ - mkpali
Nwere nsogbu ịhọrọ igbe igbe? Anyị ga-enye gị ndụmọdụ!
1 March, 2018 Ọnwa Abụọ 16, 2021 admin Igbe oge a
Ọ bụrụ na ị nọ ugbu a n'itinye ụlọ gị aka ma n'ụzọ ụfọdụ ị ka nwere ohere nchekwa, mana nnukwu kaboodu amụbabeghị ohere zuru oke, ma ọ bụ na ọ dabara na ọnụ ụlọ gị, enwela obi nkoropụ. Uwe mkpuchi abụghị naanị ihe ngwọta, enwere ọbụna otu, nke bara uru karị - igbe ihe. Ngwongwo a mara mma na -arụ ọrụ ọmarịcha yana nke na -arụ ọrụ. Agbanyeghị, kedu ihe ị ga -elekwasị anya mgbe ị na -ahọrọ yana nke akwụkwọ ị ga -ahọrọ?
Tupu anyị erute n’edemede n’onwe ya, anyị ga -achọ ịdọrọ uche gị gaa na nhọrọ nke igbe igbe ihe dị iche iche, na ọnụahịa kachasị mma, nke ngosi site na ịpị EBE A.
Igbe nke igbe dị ka akụkụ nke ime ụlọ
Ọ bụrụ na ị na -eche ma na -alakwa azụ ma igbe igbe bụ nhọrọ dị mma maka ime ụlọ gị, anyị na -emesi gị obi ike na ọ bụ. Ọbụghị naanị na ọ ga -ejere gị ozi nke ọma ịwepụ ọtụtụ ihe, dịka akwụkwọ akụkọ, CD ma ọ bụ ihe nkiri DVD nke ga -eduhie naanị n'ime ụlọ, mana na nkọwa ole na ole, dị ka ite okooko osisi ma ọ bụ nnukwu efere mkpụrụ osisi, ha ga nye ya mmetụ nke ọgbara ọhụrụ na nke mara mma. Agbanyeghị, gbaa mbọ hụ na ndò agba ya dabara na mgbidi ime ụlọ gbara ya gburugburu.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na -enweghị ọnụ ụlọ sara mbara, anyị na -akwado ka ị lekwasị anya na agba nke arịa ụlọ nwere elu na -egbu maramara, nke ụlọ ahụ ga -ebuwanye ibu.
Kama nke ahụ, ọ bụrụ na minimalism dabara gị nke ọma, ma ọ bụ ebumnuche gị bụ ime ka ime ụlọ ahụ dị mma, arịa ụlọ nwere agba gbara ọchịchịrị ga -abụ nhọrọ ziri ezi maka gị.
Igbe nke drawer n'ime ime ụlọ? Gịnị mere!
Kpachara anya mgbe ị na -ahọrọ igbe igbe maka mpaghara ime ụlọ! N'ebe a kwa, a na -etinye ọtụtụ iwu, dị ka na agba ya dabara na ime ụlọ dị gburugburu, mana ọgaghị adịkwa n'ụdị. Ọ bụrụ na i wuru ụdị ejiji, chọọ igbe igbe nke ejiri chipboard mee, na ntụle, ọ bụrụ na ị nwere akwa igwe, igbe nke nwere nnukwu gloss na nkọwa pụrụ iche ga -adịrị gị.
Mgbe ị na -ahọrọ, tinyekwa uche na nnukwu ebe nchekwa zuru oke, nke ị ga -emecha jiri n'ime ime ụlọ, ma ọ bụ maka uwe ime, akwa nhicha, ákwà mgbochi na akwa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
Echefula obere ụmụaka
Banyere igbe igbe n'ime ụlọ ụmụaka, ị kwesịrị ị paya ntị na ihe ole na ole ozugbo. Nke mbụ, nke kachasị mkpa n’ime ha bụ, nchekwa. Kpọsị, anyị na -ekwu na mmeghe ya ekwesịghị ịdị mgbagwoju anya kama ọ dị mma, ka nwatakịrị wee nwee ike ijikwa ya n'onwe ya. Ọzọkwa leba anya n'ihe na-adịghị ize ndụ nke na-emezu ihe niile dị mkpa na njirisi.
Isi ihe nke abụọ bụ ịrụ igbe nke ihe ndozi n'onwe ya. Gbado anya na ndị nwere nnukwu ebe nchekwa dị omimi, ka, na mgbakwunye na ihe nkịtị dịka uwe, ihe ndị ọzọ si n'ime ụlọ nwere ike dabara na ya, ma ọ bụ ihe egwuregwu, akwụkwọ ma ọ bụ ndị ọzọ dị iche iche.
Na nchịkọta, nhọrọ dị mma mgbe ị na-ahọrọ igbe ndị na-ese ihe maka ime ụlọ ụmụaka bụ ndị nwere ọtụtụ draịva na ọnụ ụzọ, nke bara uru ma dịkwa ọnụ ala.
Anyị nwere olile anya na ndụmọdụ na ntụnye aka anyị abaarala gị uru, na ị ga-ejikwa ha wee weta ụlọ gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị nwere ike lelee nhọrọ dị iche iche nke igbe igbe na ọnụ ahịa kacha mma ị nwere pịa Ebe a ka ịlele.
igbe nke ihe osise
Obere ime ụlọ? Enweghị nsogbu, anyị ga -adụ gị ọdụ ka esi emeso ya!
Ị na -ekpebi n'etiti akwa na oche akpụkpọ anụ? Ị kwesịrị ịma nke a gbasara ha!